Zvinorehwa neplatinamu zvinorevei muCambodia? - Kuongorora kwesainzi
Zvinoenderana nezvatakacherekedza panguva yekudzidza kwedu, hapana chaiko platinamu muCambodia. Vanhu veCambodian vanoshandisa zvisizvo izwi rekuti "Platinum" kana "Platine" kurondedzera chiwanikwa chesimbi chine imwe chikamu chegoridhe.
Takatenga zvishongo zveplatinam mumaguta akasiyana siyana uye nemhando dzakasiyana dzezvitoro kuti tinyatsoona kuti iyi simbi chii. Isu takateererawo kumutengesi wega wega kuti tinzwisise tsanangudzo dzadzo, uye heino mhedzisiro yatinowana.
Nhamba dzatinopa ndedzemawere uye ruzivo rwacho rwakanyatsojeka sezvinobvira. Nekudaro, mhedzisiro yekuferefetwa kwedu haidi kuenderana nezvose zvabuda mumajuru ese, zvinogona kuve nezvakasiyana.
Chii chaizvo chinonzi platinamu?
Standart platinamu (nhamba 3)
Platinum nhamba 5 uye 7
Platinum nhamba 10
Kubatsira uye kusiyanisa nematombo ezvishongo
Zvakaipira kune jewelers
Kubatsira uye zvakaipa kune vatengi
Platinamu chaiyo yakajeka, ine ductile, uye inorema, sirivha-chena simbi. Platinamu yakanyura kupfuura goridhe, sirivheri kana mhangura, nokudaro ichiva yakanakisa simbi dzakachena, asi haina hurema pane goridhe.
Platinum chinhu chemakemikari chine chiratidzo Pt uye nhamba yeatomiki 78.
Kusvika parizvino, hatisati tambowana chaiko platinum yezvishongo mune chero shopu yezvishongo muCambodia. Asi izvi hazvireve kuti hazvigoneke kuwana
Goridhe vs Platinamu
Vanhu veCambodian vanoshandisa izwi rekuti "Meas" chete kutaura nezve goridhe chairo. Asi goridhe rakachena rakapfava zvekushandisa zvishongo.
Kana chishongo chakagadzirwa negoridhe chiwanikwa musanganiswa nezvimwe simbi, haina kutorwa se "Meas", asi se "platinum".
Noone anoziva kwakatangira iko kushandiswa kwezita rekuti "Platine", asi isu tinofungidzira kuti rakabva pazwi reFrance "Plaqué" kana izwi reChirungu "Plated", zvinoreva kuti chishongo muCambodia chakafukidzwa nesimbi yakakosha , apo pane simbi isingadhuri mukati. Isu tinofungidzira kuti zvinoreva zvaive zvachinja nekufamba kwenguva.
Chaizvoizvo, cambodians vanoshandisa zita reFrance mavambo "Chromé" kutaura nezvezvakavezwa zvishongo.
Kuteerera kune vanotengesa tsanangudzo, iyo yakajairika platinamu iplatinamu 3. Izvo zvinofanirwa kureva 3 / 10 yegoridhe, kana 30% yegoridhe, kana 300 / 1000 yegoridhe.
Muchokwadi, kuedza kwedu kwese kwakakonzera kune yakaderera pane 30% goridhe mune aya mabwe, sezvamunoona pasi apa, avhareji iri 25.73%. Izvi zvinogona kusiyanisa nezvishoma muzana pakati pezvitoro zvakasiyana, uye kazhinji zvikamu zvinosiyana nezvishongo kubva kuchitoro chimwe chete.
Kuedzwa ne: Energy Disversive X-Ray Fluorescence (EDXRF)
Kana isu tichienzanisa nhamba idzi nemaitiro epasi rose, zvinoreva kuti iri 6K goridhe kana 250 / 1000 goridhe
Unhu uhwu hwesimbi hahuko mune dzimwe nyika, nekuti hushoma hwegoridhe hunoshandiswa seyenzvimbo dzenyika ndeye 37.5% kana 9K kana 375 / 1000.
Kuteerera kune vanotengesa tsanangudzo:
Platinum nhamba 5 inofanirwa kureva 5 / 10 yegoridhe, kana 50%, kana 500 / 1000.
Platinum nhamba 7 inofanirwa kureva 7 / 10 yegoridhe, kana 70%, kana 700 / 1000.
Asi mhedzisiro yacho yakasiyana
Kune nhamba 5, mhedzisiro yacho ishoma pane yaifanira kunge iri, asi inogamuchirwa, zvisinei, mutsauko wacho wakajeka nekuda kwenhamba 7.
Huwandu hwegoridhe hwakafanana pakati pehuwandu 5 uye 7, asi ruvara rwesimbi rwakasiyana. Chokwadi, nekushandura huwandu hwendarira, sirivheri uye zinc, iwo mavara ekuchinja kwesimbi.
Kudiwa kwakaderera kune platinamu 5 uye 7. Zvishongo hazviwanzo kutengeswa sezvigadzirwa zvakagadziriswa muCambodia. Izvo zvinonyanya kudikanwa kuti uzvironge kuitira kuti zvishongo zvigadzire jira kunyanya kumutengi.
Nhamba yePlatinamu 10 ndarama yakachena, nekuti inofanirwa kuve 10 / 10 yegoridhe, kana 100% yegoridhe, kana 1000 / 1000 yegoridhe.
Asi pachokwadi, platinum nhamba yegumi haipo, nekuti pakadaro, goridhe chaiyo inonzi "Meas".
Kambodiya vs mwero wepasi rose
Kuenzaniswa nemhando dzepasi rose, Cambodian platinamu yakafanana negoridhe dzvuku. Alloy ine huwandu hwakakura hwegoridhe. Iyo zvakare iri yakachipa nzira yekugadzira goridhe, nekuti mhangura inodhura zvakanyanya kupfuura mamwe masimbi anoshandiswa mune alloys endarama.
Goridhe yero yeyakajairwa mune dzimwe nyika ine zvishoma zvishoma zvegoridhe asi yakawanda sirivheri kupfuura ndarama tsvuku.
Goridhe yeRose murevereri pakati pegoridhe yero uye goridhe tsvuku, saka iine mhangura yakawanda kupfuura goridhe yero, asi zvishoma ndarira kupfuura ndarama tsvuku.
Iyi inotevera ruzivo inogona kusiyana kubva kune imwe kuenda kune imwe shopu.
Zvinotaridza sekuti vamwe vezvishongo zveCambodian vanoziva kuti alloys yavo ndeyemhando isina kunaka uye kuti kunewowo nyika dzepasi rose.
Takanzwa nezve "Meas Barang", "Meas Italy", "Platine 18" ..
Mazita ese aya anogona kunge aine zvirevo zvakasiyana. Uye vatengesi mumwe nemumwe ane tsananguro dzakasiyana.
"Meas Barang" zvinoreva ndarama yekunze
"Meas Italy" zvinoreva goridhe reitaly
"Platine 18" zvinoreva 18K goridhe
Asi kubva pane zvatakanzwa, aya mazita dzimwe nguva anorondedzera mhando yesimbi, dzimwe nguva kunaka kwebasa rejuzi. Kana iri yeplatinum nhamba 18, haina musoro kana tichienzanisa nedzimwe nhamba nekuti zvaizoreva kuti iri 180% yegoridhe chaiyo.
Platinum zvishongo zvekutengesa
Iyo bhengi system yakanyarara nyowani muCambodia. Vanhu vekuCambodiya vane tsika yekudyara mari yavo muzvivakwa sekudyara kwenguva yakareba. Uye ivo vanotenga zvishongo senguva pfupi kana yepakati kuti vadzivise kushandisa mari yavo zvisizvo.
Ehezve, vanhu vazhinji havana bhajeti rekudyara mune chero chinhu, asi pavanongova nemari shoma yakachengetwa, vanotenga platinamu bangle, chishongo kana mhete.
Kazhinji, mhuri imwe neimwe inoenda muchitoro chimwe chete nekuti vanovimba muridzi.
Vazhinji vevanhu havanzwisise zvavari kutenga asi ivo havana basa nazvo nekuti ivo vaviri chete ruzivo rwavanoda kuziva ndere:
Yakawanda sei mhenderekedzo?
Yakawanda sei iyo chishongo ichatenga iyo jewelry kudzoserwa kana vachizoda mari?
Paavhareji, chishongo chinotenga back platin jewelry zvishongo zve 85% yemutengo wavo wekutanga. Izvi zvinogona kusiyana nechitoro
Mutengi anongofanira kudzosa zvishongo neinvoice kuti abhadhare nekukurumidza nemari.
Kudyara kwakanaka. Zviri nyore kuwana kakawanda mari pane chinhu chimwe chete ichocho
Vatengi vakavimbika nekuti havagone kutengesa zvishongo zvavo mune chimwe chitoro muCambodia
Unoda mari yakawanda paruoko kuti utengezve zvishongo zvevatengi. Iyo ine njodzi uye inogona kukwezva mbavha. Kunyanya pasati pazororo, apo vese vatengi vanouya panguva imwechete nekuti vanoda mari yekuenda kudunhu ravo.
Basa rakaoma uye rezuva nezuva nekuti mukuru anofanirwa kubata chitoro ari oga. Hapana vashandi vanokodzera kuita iri basa
Zviri nyore kuti udzore mari
Haufanire kuve nyanzvi
Iwe unorasikirwa nemari kana uchitengesa back
Kana iwe ukarasikirwa invoice, iwe unorasikirwa nezvose
Iwe haugone kutengesa iyo kudzokera kune imwe shopu
Zvese zvinhu zvinomhanya zvakanaka sekureba sekunge chitoro chakavhurwa. Asi kana shopu ikavhara, chii chichaitika zvinotevera?
Ndekupi kutenga Khmer platinamu?
Iwe unozviwana kwese kwese, mune chero musika mune chero guta muKingdom yeCambodia.
Isu tinotengesa Khmer platinamu here?
Isu tinongotengesa matombo emusango uye simbi dzinokosha dzakabvumidzwa kune dzimwe nyika tsika.
Isu tinopawo kugadzira uye kugadzira zvishongo zvako zvetsika mune chero simbi inokosha, uye yemhando ipi neipi, kusanganisira chaiyo Platinamu.
Tinovimba kuti kudzidza kwedu kwabatsira iwe.
Kutarisira kusangana newe muchitoro chedu munguva pfupi.